ပြီးပြည့်စုံသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ကြော်ငြာလုပ်ငန်းအေဂျင်စီကိုရှာဖွေခြင်း Martech Zone
Perfect Marketing နှင့် Advertising Agency ကိုရှာဖွေခြင်း
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 9, 2009 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 13, 2013 Douglas Karr
ပြီးပြည့်စုံသောအေဂျင်စီတွင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူ၊ အသံပါရမီ၊ ပုံနှိပ်ဒီဇိုင်နာများ၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေးကျွမ်းကျင်သူများ၊ မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများ၊ အမှတ်တံဆိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင်များ၊ စီမံကိန်းမန်နေဂျာများ၊ blogging ကျွမ်းကျင်သူများ၊ လူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူများ၊ analytics တိုင်းပလက်ဖောင်းများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် developer များ။
အကယ်၍ သင်၏ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ၄ င်း၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုတိုးမြှင့်လိုပါကမိတ်ဖက်တစ် ဦး အားအမှန်တကယ်လိုလားပါကသင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအေဂျင်စီသည်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသင့်သည်။
သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအေဂျင်စီကသင့်ကိုနားလည်သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ မဟာဗျူဟာများ၊ အတွင်းပိုင်းစီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သင်အတွင်း၌ရှိသည့်စွမ်းရည်များ။
သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအေဂျင်စီသည်သူတို့အလွန်ကြီးကြောင်းနယ်ပယ်ကိုသိသည် - သူတို့သည်ကြိုးစားမည့်အစားယင်းကိုအာရုံစိုက်ကြသည် လူတိုင်းအတွက်အရာအားလုံးဖြစ်လိမ့်မည်.
သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအေဂျင်စီသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ထားသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရှာဖွေရမည်ကိုသိရှိခြင်း။ ဘယ်မှာရှာရမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသူ၊ အသံပါရမီ၊ ပုံနှိပ်ဒီဇိုင်နာများ၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာများ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်စေရန်ကျွမ်းကျင်သူများ၊ မိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများ၊ အမှတ်တံဆိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင်များ၊ စီမံကိန်းမန်နေဂျာများ၊ မီဒီယာကျွမ်းကျင်သူများ၊ analytics တိုင်းပလက်ဖောင်းများအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် developer များ.
သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအေဂျင်စီသည်စီမံချက်များကိုမည်သို့စီမံရမည်ကိုသိသည် သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအေဂျင်စီသည်တစ်ချိန်ကသင့်အားငွေတောင်းခံ။ အခြားအရင်းအမြစ်များအားလုံးကိုပေးချေရန်ဂရုစိုက်သည်။
မနေ့ကငါအလားအလာရှိသောဖောက်သည်တစ် ဦး ထံတွင်လာပြီးညှိနှိုင်းရေးမှူးသည်သူ၏ ၀ ယ်သူနှင့်ဆွေးနွေးရန်ကုမ္ပဏီ ၅ ခုထက်မနည်းစုရုံးခဲ့သည်။ သူကသူတို့၏စိန်ခေါ်မှုများသည်သူ၏ကုမ္ပဏီအတွင်း၌ရှိသောကျွမ်းကျင်မှုများထက်များစွာပိုများကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ထွက်ခွာ။ ကုမ္ပဏီကိုကူညီရန်ကောင်းမွန်သောဒေသတွင်းကျွမ်းကျင်သူများစုဆောင်းမှုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ငါကုမ္ပဏီတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ဖို့နှိမ့်ချခဲ့သည်။
ငါအလားအလာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရဖြစ်စေမကြည့်ဖို့နေဆဲ ... ဒါပေမယ့် client ကို Evereffect နှင့်အတူသူ၏ပြီးပြည့်စုံသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေ့ရှိထားပြီးကြောင်းသံသယမရှိ။
မြို့ကလူအချို့ကသူတို့ကုမ္ပဏီဟာငါ့ကုမ္ပဏီဒါမှမဟုတ်တခြားသူတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်နေကြတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ဒါဟာစက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ဆိုးဆိုးရွားရွားကျဉ်းမြောင်းတဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစား, Co-opetition ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဝေးကြွေးကြော်သံဖြစ်သင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အကောင်းဆုံးရလဒ်ရရှိရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကြီးထွားလာမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသသည်ကြီးထွားလာပြီးကျွန်ုပ်တို့ကြီးထွားလာမည်။
Kanye, Taylor နှင့် Beyonce တို့မှသင်ခန်းစာ
9:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 11, 59
ဟုတ်ကဲ့! ငါစုပေါင်း, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်, ဆက်သွယ်မှုချဉ်းကပ်ကိုချစ်။ လူတိုင်းအနိုင်ရ
11:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 31